Ungayihambisa njani iBhlog yakho kwaye ugcine uMzobo woKhangelo | Martech Zone
NgoLwesithathu, nge-6 kaJanuwari 2010 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Ukuba unayo ibhlog esele ikho, kunokwenzeka ukuba unegunya lokukhangela elakhelwe kuloo ndawo okanye kwisizinda. Ngokwesiqhelo, iinkampani ziqala ibhlog entsha kwaye ziyilahle endala. Ukuba umxholo wakho omdala ulahlekile, oku kunokuba yilahleko enkulu ngokukhawuleza.
Ukugcina igunya lesinjini yokukhangela, nantsi indlela yokufudukela kwiqonga elitsha lokubloga:
Ukuthumela ngaphandle umxholo weblogi yakho endala kwaye ungenise kwiqonga lakho elitsha lokubloga. Nokuba uyayenza le nto ngesandla, kungcono kunokuba ungaqali nomxholo.
Bhala i-301 eqondisa kwakhona kwi-blog endala ye-URLs ukuya kwi-URLs entsha yebhlog. Amanye amaqonga aneemodyuli zokuqondisa kwakhona okanye plugins ukwenza oku kube lula.
Bhala i-redirect kwi-blog endala ye-RSS feed ukuya kwi-blog entsha ye-RSS feed. Ndingacebisa ukusebenzisa Isongezelelo ukuze uhlaziye ukutya ngaphandle kokuphazanyiswa kwixa elizayo (Nangona ndinqwenela ukuba umntu aphume nenye indlela eya kwiFeedburner! Imbi kakhulu).
Ukuba uhambisa iindawo okanye ii-subdomains, kusenokwenzeka ukuba uqondise kwakhona kwidilesi yebhlog entsha. KUNYE: Ndiqaphele ukuba abathengi baphulukana nolunye udidi lwabo xa besenza i-subdomains kodwa ngamanye amaxesha bayakwazi ukubuyisa ngokukhawuleza. Ukutshintsha kwemimandla iyonke kunokuba nefuthe elikhulu. Ndingazama ukukhusela oku ngazo zonke iindleko.
Vavanya ii-URL zakho zebhlog ezindala kwaye uqinisekise ukuba bathumela phambili ngokufanelekileyo.
Monitor Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle kwaye Ii-Bing Webmasters kumaphepha angafumaneki kwaye alungise. Sukuzikhathaza ngokujonga yonke imihla- kuya kuthatha iveki okanye ezimbini ngaphambi kokuba ubone ingxaki
Shicilela kwakhona i-Sitemap yakho kwaye uphinde uthumele ngalo lonke ixesha ulungisa izinto.
Ukuba utshintsha i-domain yakho okanye i-subdomain, eyona lahleko inkulu uya kuyithatha zikwiisayithi ezinjengeTechnorati, ezifuna ukuba ubhalise idilesi yebhlog yakho entsha. Abanazindlela zokuhlaziya idilesi yakho eyiyo.
Nantsi umfanekiso weskrini weGoogle Search Console kunye nendlela onokujonga ngayo izingqinisiso ezingama-404 ezingafunyanwanga:
Ngokuqinisekisa ukuba umxholo wakho uqondiswe ngokufanelekileyo, ayizukuqinisekisa kuphela ukuba iindwendwe zisenokuwenza umxholo ebewukhangela, uya kuvelisa amaphepha angama-404 angafumanekanga. Inqaku elinye koku… nika i-Webmasters iveki okanye ezimbini ukubamba! Emva kokuba uqondise ezo dilesi zibi, ngekhe izilungise kwangoko kwii-Webmasters (andiqinisekanga ukuba kutheni!).
Kwelo nqaku, ndihlala ndifumanisa ukuba iisayithi zangaphandle zipapasha ii-URL ezingachanekanga- ke ndiza kuphinda ndizithumele ngokufanelekileyo ii-URL ezimbi!
tags: 404bing umphathi wewebhuUmphathi wewebhu kaGoogleidatha ekumgangathoidatha yenqanaba lokukhangelawebmasterWebmaster
Mar 24, 2010 ngo 6:08 PM
Ndiyavuma ukuba iplagi yeWordPress redirection sisindisi sobomi, ndiyayithanda. Ndinqwenela ukuba ndiyazi ngoko into endiyaziyo ngoku, ngeyandisindisile entloko. Enkosi uDouglas!